Isimo sonyaka omusha senkampani ehhovisi. Izipho zenkampani Yonyaka Omusha.
Isimo sonyaka omusha senkampani ehhovisi
Yebo, emsebenzini sichitha isikhathi esiningi. Futhi umsebenzi wokubambisana, ukuze sibe njengomndeni wesibili. Ngakho-ke, kuyisono sokungawugubhi uNyaka Omusha nokuthi ujabule nalabo abelana ngezinsuku zokusebenza ndawonye. Ngakho-ke, sikulungiselele ngokukhethekile isimo esihle kakhulu seNkampani Yonyaka Omusha ehhovisi. Imininingwane eyengeziwe mayelana nemincintiswano ehlanganisa - funda ngezansi.
Isimo sonyaka omusha wemincintiswano yamabhizinisi
Lapho leli holide seliqalile ukuqala imizwelo emihle, sincoma ukuphatha imincintiswano eminingana phakathi kwetafula lokugubha. Ake siqale ngomncintiswano wokuqala wama-comic, okuyisisekelo sokudluliselwa ngokushesha kwebhola noma ibhodlela leplastiki ngaphandle kokusetshenziswa kwezandla. Ngakho-ke, abahlanganyeli bahlukaniswe ngamaqembu amabili alinganayo (okungenani okungenani abantu abangu-4 ngamunye). I-activist yokuqala ibuzwa ukuthi ibeke phakathi kwemilenze ibhola elingenasiphelo noma ibhodlela. Umsebenzi ukudlulisela into kumhlanganyeli olandelayo ngokushesha ngangokunokwenzeka ngaphandle kokusebenzisa izandla zakho. Ithimba labo lizobhekana ngokushesha nalo msebenzi, walinqoba. Njengamaphuzu ungabonisa amamitha omnyaka omusha, amaski noma izikhumbuzo ezihlekisayo.
Umncintiswano wesibili wasungulwa esikhathini eside esidlule, kodwa noma kunjalo, awuzange ulahlekelwe ukuhambisana kwawo esikhathini sethu. Umqondo womncintiswano ukusika ama-chocolate amaningi ngangokunokwenzeka, oboshwe emazingeni ahlukene entambo elulele. Ngenxa yalokhu, amawele amabili athulwe ngokufanayo, lapho inani elinganayo le-lozenges lishaywa ezindaweni ezihlukahlukene. Kusuka eqenjini ukhethe ababambiqhaza ababili futhi uvale amehlo. Ngesikhathi ingoma idlala, umsebenzi wabo ukukhipha ama-candy amaningi ngangokunokwenzeka ngezikhisi. Empeleni, akuyona elula njengoba kungase kubonakale, ngakho-ke kuyoba mnandi kakhulu!
Enye indlela eyokusiza ukuba ujabulele ukuthatha inkampani yabasebenzi umncintiswano "Intuition".
Isishoshovu esikhethiwe sithathwe emaminithini ambalwa ekamelweni, simbopha futhi sigqoke izandla zegantshi ezinzima, okuyinto okunzima kakhulu ukubona noma yini ngokuthintana. Phakathi naleso sikhathi, izipho zibekiwe etafuleni. Kungaba: i-orange, indebe, i-notebook, ibhodlela likabhiya, inhlanzi yezinhlanzi ezikhonjiwe (ngokujwayelekile, noma yini okushiwo i-fantasy). Uma umuntu eqagela lokho akuphethe ezandleni zakhe, umklomelo ususwa. Kulo mncintiswano, inqubo yokuzwa indaba yowomhlanganyeli iyinhlekisa.
Izinhlobonhlobo zezipho zenkampani Yonyaka Omusha
Njengoba ukuqoqwa kukhulu futhi ukunikezwa kwezipho kuyovuleka, okukhethwa kukho okuyizona izipho ezifanayo, ngakho-ke akukho amacala nokuthukuthela. Ukungaboni ngaso linye - lokhu kuzosiza ukuhlukaniswa ngobulili nombala. Ngakho-ke, isibonelo, amantombazane, unganika izigcawu zokuzithokozisa, izinhlayiya + namagilavu, njll. Amadoda anganikwa idayari emele noma isikhwama esihle. Njengemiklomelo yemincintiswano ungakhetha ama-trinkets aphansi kakhulu.
Isimo esingenhla sebhizinisi sizovumela idili leNew New Year elijabulisayo nelisebenzayo ehhovisi. Uhlelo luhlelwe amahora angu-3-4, ngakho-ke kunesikhathi esiningi. Qinisekisa ukuthi izisebenzi zakho zizokwaneliseka futhi zizokhumbula isikhathi eside isikhathi esihle!
Ukugqoka komnyaka omusha kumabhizinisi
Yeka indlela engavamile ukuhalalisela ozakwabo ngonyaka omusha
I-New Wave 2008
"Abagibeli bamahlathi" baphuma kusuka kumahlaya kuya esibukweni esikhulu
Indlela yokufaka imali kwi-skype?
Hlangana nabaseSpartan (Hlangana nabaseSpain) ngo-2008
Izimonyo Zokwemvelo - I-Organic Cosmetics
I-aluminium yokupheka emaphoyisini namasango: ukuhlanza nokushisa kanjani?
Izinkinga zomphakathi nezengqondo zemikhaya enesidakwa
Amaholide nomntwana: izincomo eziwusizo
Amaswidi okuzenzela ngamanqamu
Ukulima kanye nokukhiqizwa kwamakhiwane ekhaya
Amakhambi omphakathi wokhala
Ukuhlanzeka kwengane, ukunakekelwa kwezinwele
Ukwelashwa kokwesaba kanye nemithwalo yezokwelapha
Izimbali eziphehliwe zucchini nge shizi
Utshwala ezinyangeni zokuqala zokukhulelwa
Amathiphu wesazi sokusebenza kwengqondo uma umyeni wakhe efika kuqala
Yini ongayithengi usana olusanda kuzalwa
Masikhulume ngemithi yokwelapha yeganga